खोइ, खुला चउर ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — भदौ २ को कोसेलीमा प्रकाशित ‘आई हेट ‘स्कुल’ लेख पढें । हाम्रो समाजको आवाजलाई लेखमा समेटिएको पाएँ । यसमा हजारौं र लाखौं विद्यार्थीको आवाज लुकेको छ ।
म अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा समाजशास्त्र पढाउँछु । यी कुराहरू मेरो मनमा पनि खेलिरहेका थिए । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा बच्चाहरूलाई क्रमश: भुत्ते बनाउँदै लगिरहेको छ, यो भुत्ते हुँदै गएको वर्तमान सम्झ्यो भने यी नानीहरूको भविष्य सम्झनै डर लाग्न थालेको छ । स्वभावत: यो लेखमा समस्या उजागर गरिएको छ, तर समाधान भने अझै अपेक्षित छ ।
—डा मनोज शर्मा
‘आई हेट ‘स्कुल’ पढेर भिन्न तरंग ल्यायो । म अहिले कक्षा १२ सकेर नेममा डाक्टर बन्ने तयारीमा छु । डरैडरमा पूरा गरिएको पढाइको अनेक चरणमा मलाई कसैले पनि ‘आफ्ना लागि पढ्नुपर्छ’ भनेर सिकाएन । घरमा परिवारका सदस्यहरूको डर अनि स्कुलमा सर–मिसको डरको कारणले मात्रै पढ्नुपरेको हो भन्ने सधैं लागिरहयो । मेरा लागि आफ्नो स्कुल कुनै जेलभन्दा कम थिएन । म सजाय काट्न गएको अनुभूति भइरहन्थ्यो । अझै पनि त्यो डर अनि बोझ हटिसकेको छैन । यसरी विद्यार्थीका लागि डर, बोझ, भार हुने गरी पढाएर कसलाई फाइदा होला ? तैपनि यो कुरा कसैले किन नबुझेको होला ?
सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश
साउन १९ को कोसेलीमा प्रकाशित सावित्री गौतमको ‘बहकिएको बहस’ लेख अनुभव र यथार्थ आधारित लाग्यो । लेखकबाट धेरै प्रश्नको उजागर भएको छ, लेखन विषय सोचनीय र शैली आकर्षक छ । लैंगिक चेतनाका कुरा अघि बढाउन तथा समानता र सुरक्षाका हिसाबमा सन्तुलित समाज बनाउन यो बहस सान्दर्भिक छ ।
बदलिँदो समाजमा बदलिएको सोचमा हिँड्न, नारीप्रतिको सम्मान बढाउन र लैंगिक सर्वोच्चता हटाउन पनि पुरुषहरूले व्यवहार, कार्य र सोच बदल्न जरुरी छ ।